नेपालका राजनीतिक दल र कानूनको विकास
काठमाडौँ, ५ फागुन । बीसौँ सताब्दीमा निरंकुशताको विकल्पमा प्रजातन्त्रको बहस हुन थालेको थियो । युरोपको वेलायत लगायतका केही देशमा प्रजातन्त्रको अभ्यास भएपनि अन्य मूलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था थिएन । तीन
‘तिमी’ भनेर बोलाउने श्रीमान्ले ‘त’ भन्दा…..
टीकापुर, २३ माघ । कैलालीकी रुपा आजभोलि सम्मानजनक व्यवहारका कुरा गर्दछिन् । १३ वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह गरेकी रुपाका श्रीमान् जागिरे हुन् । तीन सन्तानकी आमा उनले श्रीमानबाट कहिल्यै राम्रो
काठमाडौँ, २२ माघ । पश्चिम न्यूनचापीय वायुका कारण बदली हुँदा शुक्रबार देशैभर वर्षा र हिमपात भएको छ । बिहीबारदेखि देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा परेको वर्षा र हिमपातले देशभरको
को हुन् सहिद ? किन बन्न सकेन सहिदको परिभाषा र मापदण्ड ?
काठमाडौँ, १६ माघ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोषमा उल्लेख भएअनुसार सहिद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने
बिर्तामोड, ३ माघ । कोरोनाका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । बेरोजगारलाई लक्षित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बिर्तामोड नगरपालिकालाई कुल १ करोड
झापा, १ माघ । पर्यटकीय नगरी पोखराको आकाशमा मात्र प्याराग्लाइडिङ उड्ने गरेकोमा इलाम रोङ गाउँपालिका–६ झण्डिडाँडाबाट परीक्षण उडान गरिएको छ । पहिलो परीक्षण उडानमा वडाध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले उडान भरेका छन्
काठमाडौँ, २५ पुस । नेपालमा काजु र आलमण्ड (मधेसी बदाम, हाडे बदाम)को व्यवसायिक खेतीको सम्भावना भएपनि सरकारले चासो नदिँदा वार्षिक अर्बौ रुपैयाको आयात हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको
काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिमा छ दशकदेखि निरन्तर सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्री देउवा मङ्गलबार सम्पन्न पार्टीको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गतको पुनः मतदानबाट पार्टी सभापतिमा